CAYAARAHA | Bakool.net | Page 40
Home / CAYAARAHA (page 40)
Tababare Jurgen Klopp Oo Markii Ugu Horraysay Ka Hadlay Qaabka Dar Darta ah Ay Kooxdiisa Liverpool Ku Bilaabatay Xilli Ciyaareedka Cusub Ee 2018-2019
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaabka wacan ee ay kooxdiisu ku bilaabantay horyaalka kaddib bandhigyo cajiib ah oo ay kala soo muuqdeen afartii kulan ee ugu horreeyay ee horyaalka laga ciyaaray ilaa haatan. Wiilasha Jurgen ayaa guulo xidhiidh ah ka gaadhay kooxaha West Ham United, Crystal Palace, Brighton & Leicester City waxaana ay ...
Luis Suarez Oo Pogba U Sheegay Waxa ay Barcelona ka caawin karto
Laacibka kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa caddeeyay rabitaankiisa ku aaddan inuu isaga tago garoonka Old Trafford. Barcelona ayaa xagaagan intii uu furnaa suuqa kala iibsiga dhowr jeer isku dayday, balse ciyaaryahanka ayaa ugu dambeyn kasii mid ah United. Weeraryahanka kooxda Barca ee Luis Suarez ayaa sheegay Pogba inuu uu baahanyahay inuu weerarka ka qayb qaato taasoo ka duwan ...
Macalinka kooxda Real Madrid Julen Lopetegui ayaa wuxuu shaaca ka qaaday liiska rasmiga ah ee ciyaartoyda Los Blancos kaga qeyb gali doonta tartanka Champions League xili ciyaareedkan 2018/2019. Real Madrid ayaa ku jirta Group G ay kuwada jiraan kooxaha Roma, CSKA Moscow iyo Viktoria Plzen, waxayna u badan tahay Los Blancos in ay groubkan kaga gudbi doonto wareega 16-ka. Hadaba ...
Mourinho Oo Ku Dhawaaqay liiska Ciyaartoyda Kaga Qeyb Galaya Tartanka Champions League
Macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ku dhawaaqay liiska xidigaha uu u soo xushay in kala qeyb galaan xili ciyaareedkan 2018/2019 tartanka Champions League. Kooxda reer England ee Manchester United ayaa markii ugu dambeesay ay kusoo guuleysato tartanka Manchester United waxay ahayd sanad-kii 2008. Hadaba liiska rasmiga ah uu ku dhawaaqay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho si ...
Xiriirka Kubada Cagta Talyaaniiga Ayaa Kooxo Ka Ciyaara Horyaalka Talyaaniga Ganaaxay
Xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa ganaax ku riday 3-koox kadib kulamadii la ciyaaray bilowgii isbuucaan. Kooxaha xiriirka kubadda cagta talyaanigu uu ganaaxay waxaa kamid ah Napoli, Sampdoria iyo kooxda SPAL sida ay baahisay Football Italia. Napoli ayaa lagu ganaaxay bixinta lacag dhan 3 kun oo euro kadib markii taageerayaasheedu ay adeegsadeen mabmada qiiqa iyo waliba wax yaabaha holca intii uu ...
Xidiga Manchester United Ander Herrera Oo Diyaar U ah inuu Ka Tago Kooxda
Ander Herrera ayaa diyaar u ah inuu dhageysto dalabyada lagu doonayo si uu uga tago kooxda Man United. Xiddiga qadka dhexe ee reer Spain ayaa doonaya inuu ka tago Old Trafford marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo sida uu warinayo warsidaha Metro kaddib markii ay kooxdu dib u dhigtay inay u soo bandhigto qandaraas Cusub. ...
Raheem Sterling Oo laga reebay xulka England Maxay tahay Sababta Ka Danbeysa?
Raheem Sterling ayaa laga reebay xulka England ee la ciyaaraya Spain iyo Switzerland maadaama uu qabo dhawac dhabarka qeybta hoose ah. Laacibka Manchester City ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiro shaxda tababare Gareth Southgate ka hor inta aysan maanta tababarka bilaabin. Laakiin Taam wuu u noqon waayay inuu ku soo biiro shaxda xulka, Tababare Southgate ayaana u yeerin laacib badela ...